के कारणले हुन्छ महिलालाई बढी थाइराइड ? - Tree Media News
के कारणले हुन्छ महिलालाई बढी थाइराइड ?
tmednewsPosted on २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार
थाइराइड रोग कस्तो हो ?
हाम्रो शरीरको थाइराइड ग्लान्डले थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइरोक्सिन हर्मोनले शरीरको सम्पूर्ण भागका खानालाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छ । यो हर्मोनले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको अवस्था स्वस्थ अवस्था हो । यो अंगले बढी काम गर्ने या कम काम गर्ने भएमा हर्मोन उत्पादन घटबढी हुन्छ । यसले बढी या कम काम गर्नु नै थाइराइड हुनु हो ।
थाइराइड कति प्रकारका हुन्छन् ?
थाइराइड दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा, हाइफोथाइरोडिज्म ( थाइरोक्सिन हर्मोन कम उत्पादन गर्ने) । अर्को, हाइपरथाइरोडिज्म ( थाइरोक्सिन हर्मोन बढी उत्पादन हुने अवस्था)।
हाइपोथाइरोडिज्म कसरी हुने गर्दछ ?
अर्को शब्दमा हाइपोथाइरोडिज्म पनि भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा ग्रन्थीले आफै हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन । यसलाई अटोइम्युनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म हो । हामी कहाँ यही अटोयुमिनको कारणले हुने हाइपोथाइरोडिज्म धेरैलाई छ । धेरैले थाइराइड भयो भनेको पनि यही हो भन्ने बुझछन।
अर्को कुरा, मोटोपना भयो भने शरीरको मागअनुसार हर्मोन पूरा हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि हाइपोथाइरडिज्म हुन्छ । त्यसैगरी गर्भावस्थामा पनि यो थाइराइड हुन्छ । गर्भको बच्चाले पनि यो हर्मोन खपत गर्ने हुनाले बढी थाइरोक्सिन हर्मोनको आवश्यकता पर्छ । यस कारण गर्भवती महिलामा थाइराइडको समस्या देखिन्छ । यी दुवै थाइराइड अस्थायी प्रकृतिका हुन् । जुन बच्चा जन्मेपछि र मोटोपना घटेपछि आफै हराउँछ ।
हाइपर थाइराइरोडिज्म कसरी हुने गर्दछ ?
यो थाइराइड ग्रन्थीले चाहिनेभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था हो । शरीरका विभिन्न भागमा थाइरोक्सिन हर्मोन लिने रिसेप्टर हुन्छ । रिसेप्टरमा एन्टीबडी बस्यो भने थाइराइड पुग्नै दिँदैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा थाइराइडको स्थिति कस्तो छ ?
नेपालमा पहिलेदेखि नै थाइराइड थियो । तर पछिल्लो समय थाइराइडको जाँच गर्ने चलन र उपचार दुवै बढेकाले बढी भएजस्तो देखिएको हो । नेपाल मात्र नभइ अन्य देशमा पनि थाइराइड परीक्षण पछि मात्र भएको हो ।
दश वर्ष अघिसम्म नेपालमा इन्डोक्राइनोलोजिस्ट र यसको सेवा थिएन । केही जाँचका लागि भारत पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अरू देशहरूमा पनि थाइराइड परीक्षण नियमित हुँदैनथ्यो । अहिले यससँग मिल्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै जाँच गर्न जाने चलन ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । बिरामी र चिकित्सक दुवै सचेत भएको देखिन्छ ।
थाइराइडको जस्तो लक्षण देखियो भने स्त्रीरोग विशेषज्ञले पनि थाइराइड टेस्ट (जाँच) गर्छन् । पेटको समस्या भयो भने पेटको डाक्टरले थाइराइड टेस्ट गर्छन । मुटुको धड्कन बढ्यो भने पनि थाइराइड परीक्षण गर्ने चलन छ । पहिला नेपालमा इन्डोक्राइनोलोजिस्ट नै थिएनन् र छुट्टै विभागबाट यो सेवा दिँइदैनथ्यो ।
हाम्रो जीवनशैलीसँग थाइराइडको के सम्बन्ध छ?
जुन निश्चित अर्डिमेनलाई अन्डरमाइन गर्न सक्दैन । आजका मान्छे जो बढी मोटा हुन्छन्, उनीहरूमा पनि थाइराइड देखिन्छ । जसलाई अटोइम्युन र भाइरलका कारणले नभइ मोटोपनाका कारणले थाइराइड भएको हुन्छ । उनीहरूको हकमा जीवनशैली पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ ।
अहिलेको जीवनशैलीमा मोटोपना भएकाहरूमा कम तहको हाइपोथाइरड देखिन्छ । अर्थात् माइल्ड डिस्पंmसन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तौल घटाइदियो भने थाइराइड घट्छ । अन्य कारणले थाइराइड भएकाहरूलाई भने तौल घटे पनि थाइराइड सामान्य हुँदैन ।
यी दुईमध्ये छिटो असर पु¥याउने थाइराइड भनेको हाइपर थाइराइड हो । असर तुरुन्त देखिन्छ । थाइराइडको बढी खतरनाक असर पु¥याउँछ । कुनै पनि अवस्थामा मुटु फेल बनाइदिन्छ । खतरनाक जटिलता भनेको आँखा रातो हुने आँखा बाहिरै निस्कने समस्या आउँछ । अर्को मुटुमा समस्या यति धड्कन बधाइदिन्छ कि मुटु नै फेल बनाइदिन्छ ।
महिलालाई के कारणले थाइराइड बढी हुन्छ ?
थाइराइडबाट बच्ने उपाय कस्ता छन् ?
Previous Postग्यास्ट्रिक तथा अल्सरलार्इ निको पार्ने अकबरे खुर्सानीPrevious Post
Next Postबढ्दै छ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाNext Post